Fihomehezana Lehibe Tao Venezoela · Global Voices teny Malagasy
Fihomehezana Lehibe Tao Venezoela
Voadika ny 14 Septambra 2017 2:31 GMT
Hanatontosa fifidianana mahatsikaiky indrindra eo amin'ny tantaran'ny firenena ny Venezoeliana. Nanambara tamin'ity herinandro ity ilay mpihira Benjamin Rausseo, fantatra amin'ny anarana hoe Er ‘Conde del Guacharo (Count of Guacharo), fa hirotsaka hofidiana filoha izy. Mpanao hatsikana malaza indrindra ao Venezoelà i Rausseo, ary tsy manana traikefa ara-politika. Ny toetrany dia lehilahy mpanao asa tanana avy ao avaratra atsinanan'ny firenena (moron-dranomasina Karaiba), manana toetra lazaina fa mampiavaka azy toy ny kamo sy mpanenji-body; miteniteny foana izy, ary tsy miraharaha loatra ny raharaham-bahoaka na ny soatoavin'ny fianakaviana. Tany am-boalohany, naneso ny toetra ratsy mifandraika amin'ny vahoaka Venezoeliana ny toetra, saingy mahagaga fa nahita ny toetra somary maha te ho tia ny olona, ary tia azy ny ankamaroan'ny olona.
Nahazo tatitra goavana tamin'ny fahitalavitra tamin'ny fanambarany hirotsaka hofidiana filoha i Rausseo, mihoatra lavitra noho ny kandidà filoham-pirenena hafa hatramin'izao. Manararaotra ny aterineto ny fampielezan-keviny, ary ahitana weblog, seha-pifanakalozan-kefitra anaty aterineto, sy tambajotran'ireo bilaogera manohana an'i Er ‘Conde.
Manasongadina ny ezaka nataon'i Conde hahazoana fanohanana avy amin'ireo mpisera aterineto, indrindra avy amin'ireo bilaogera, sy ny “tsunami” manohana ny fanirian'ilay mpanao hatsikana ny Chorro de Escape.
No se si me equivoco, pero primera vez que un candidato presidencial se ocupa tanto de la gente que esta en internet, especialmente de nosostros los blogeros y la respuesta que ha recibido ha sido “un tsunami” como dijo el, muchisimos blogs ya se estan uniendo, los medios lo estan apoyando muchisimo, porque el Conde ahora tiene mucho que decir.
Tsy fantatro raha diso aho, saingy sambany nisy mpilatsaka ho fidiana filoham-pirenena niezaka mafy hipaka amin'ireo olona ao amin'ny aterineto, indrindra fa ireo bilaogera, ary ny valinteny azony dia “tsunami” araka ny tiany lazaina. Betsaka ireo bilaogy efa mitambatra sahady ary manome fanohanana betsaka ny fampahalalam-baovao satria manana holazaina betsaka ankehitriny ny “The Count “.
Nanangona lisitra marobe misy ny fanehoan-kevitr'ireo bilaogera mikasika ny fanirian'i Rausseo ho filoham-pirenena iTopochoblog.
Maro ireo bilaogera naneho fientanam-po tamin'i Er’Conde, tahaka an'i Lilibeth izay nilaza hoe,
Entre tanto desbarajuste político yo prefiero morir de Risa que morir de hambre y miseria!
Amin'ireo korontana ara-politika marobe, aleoko matin'ny hehy toy izay matin'ny hanoanana sy ny fahantrana!
Tsy misy henatra mihitsy, nilaza ireo bilaogera sasany fa mety hifidy an'i Rausseo ihany izy ireo. na inona na inona, lasa hatsikana malaza ny politika Venezoeliana.
Ny fanehoan-kevitra faharoa malaza indrindra dia ny fanevatevana
los políticos venezolanos, sin haber estado jamás en un escenario, suelen dar más risa que er Conde, aunque es una risa agria.
Matetika mampihomehy noho i er Conde ireo mpanao politika Venezoelana, tsy tao anatin'ny hatsikana, na dia fihomehezana tsy misy haravoana aza izany.
Mifanohitra amin'izany kosa, nihomehy mafy ireo bilaogera Chavista, tahaka an'i Alex izay milaza fa “ity no fizaran'ny tantara ara-politikan'ny Venezoeliana mampihomehy indrindra.”
Nanome sioka hafa momba ny raharaha i Lobo Hombre. Nilaza izy fa mamoaka ny hadalan'ny politika Venezoeliana i Rausseo.
Lo que el conde está haciendo acá (repito: genialmente) es poner de manifiesto en nuestra propia cara lo ridículas, viscerales e irreflexivas que son nuestras posturas políticas
Ny ataon'ny “The Count” eto (mamerimberina: tsara aho) dia mampiseho mazava amintsika fotsiny fa mahatsikaiky, manjavozavo sy tsy malina ny toerantsika ara-politika.
Angamba, marina ny an'i Lobohombre.